နေ့လည် ၂ နာရီမှာ ဖွင့်တာဆိုတော့" Day Club " ပေါ့
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် ကလေးများရှိသော မိဘများအတွက် အထူးအသိပေးချက်
ဂျူလိုင်လ 22, 2013 (9:00pm) မင်းနဒီ
ဒီနေ့ ရန်ကုန်ဆရာစံလမ်းထိပ် Pearl Condo အောက်က Asia Light မှာ လင်းလင်း အခွေအသစ် ဝင်ဝယ်ရင်း တွေ့ခဲ့တာလေးပါ။
တကယ့်ချာတိတ်လေး တစ်ဖွဲ့ ( ၁၅နှစ် အရွယ်လောက် ) အရက်တစ်ပုလင်း စုဝယ်နေကြတယ်။ မြင်ကွင်းက မလှဘူးဗျာ။ ထားလိုက်ပါလေ။
ပြန်ထွက်လာတော့ ဘေးက Eucalypt ဆိုတဲ့ဆိုင်မှာ တံခါးတွေပိတ်ထားပြီး အထဲမှာ DJ ဖွင့်ထားတဲ့ အသံတွေ အပြင်က အတိုင်းသား ကြားနေရတယ်။ အပြင်မှာ ကလေးတွေ ၃၀ လောက်ရှိတယ်။ တချို့ချာတိတ်တွေက မူးလို့။ တချို့က ဆေးလိပ်လေးတွေ လက်ကြားညှပ်လို့။ ချာတိတ်မလေးတွေဆို ဆယ်တန်းတောင် မရောက်သေးတဲ့ အရွယ်တော်တော်များများလေးတွေ။ အားလုံးရဲ့ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုက မောင်နှချင်း တွဲမသွားသင့်တဲ့ပုံစံတွေ။
Night Club ဝတ်စားဆင်ယင်မှုပေါ့။
တံခါးကြီးပိတ်လို့ အဝမှာ ကျွန်တော်မျက်မှန်းတန်းမိတဲ့ စားပွဲထိုးလေးက လက်မှတ်ရောင်းနေတယ်။
(ဝန်ခံပါတယ်။ အရင်က ကျွန်တော်ထိုင်ခဲ့တဲ့ ဆိုင်ပေါင်းများစွာထဲမှာ ဒီတစ်ဆိုင်လည်းပါတယ်။)
သွားစပ်စုကြည့်တယ်။ promotion ပွဲလားဆိုတော့
မဟုတ်ဘူးဆရာ " Day Club " တဲ့။ နေ့လည် ၂ နာရီမှာ ဖွင့်တာဆိုတော့ ဟုတ်တာပေါ့ " Day Club " ပေါ့လေ။
မင်းကွာ ငါလည်း Night Club သွားပါတယ်။ အခုက ကလေးတွေချည်းပဲဆိုတော့ အထဲမှာ ဒီထက် ငယ်တာလေးတွေတောင် ရှိသေးတယ်တဲ့။ သူတို့တွေက ညဖက်ထွက်လို့ အိမ်က မိဘတွေနဲ့ သိပ် အဆင်မပြေဘူးလေတဲ့။
ကျွန်တော် အပြန်မှာ တစ်လမ်းလုံး စဉ်းစားတယ်။
ဒီကလေးတွေ အိမ်က မိဘတွေကို ဘယ်လိုပြောခဲ့သလဲ။
ဘာကို အတုခိုးနေကြတာလဲ။ ဘာကြောင့်ခွင့်ပြုနေကြတာလဲ။ ခေတ်မှီတယ်ဆိုတာ ဘာလဲ။
ချစ်စရာ လူငယ်လေးတွေဆိုတဲ့ ဂုဏ်ကို ဘာလို့ မထိန်းတော့တာလဲ။
ကျွန်တော်လည်း အဖေတစ်ယောက်ပါ။ ရင်လေးမိတယ်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 7/29/20130အကြံပြုခြင်း
Myanmar Suspended Coffee
ကျွန်တော်တို့သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကော်ဖီဆိုင်တစ်ခုထဲကိုဝင်ပြီးကော်ဖီနှစ်ခွက်မှာတယ်..ပြီးတော့ မလှမ်းမကမ်းမှာရှိတဲ့စားပွဲမှာထိုင်ဖို့လျှောက်သွားလိုက်တယ်... စားပွဲမှာနေရာယူဖို့ပြင်ဆင်နေတုန်းပဲ ဆိုင်ထဲကို ရုပ်ရည်သန့်သန့်ပြန့်ပြန့်နဲ့ နှစ်ယောက်ဝင်လာပြီး ကော်ဖီမှာပါတယ်...မှာပုံက ကော်ဖီငါးခွက် ၂ခွက် ကကျွန်တော်တို့သောက်ဖို့ သုံးခွက်ကိုတော့ suspended(ဆိုင်းငံ့)ထားပေးပါ.. ကျွန်တော်လည်းမှာထားတဲ့ကော်ဖီမလာသေးတာကတစ်ကြောင်း ကျွန်တော့်ရှေ့တည့်တည့်မှာရောက် နေတာတစ်ကြောင်းကြောင့် ဆက်ကြည့်နေမိတယ်..သူတို့ ကော်ဖီငါးခွက်ဖိုးရှင်းတယ်...ပြီးတော့ ကော်ဖီနှစ်ခွက်ယူပြီး ပြန်ထွက်သွားတယ်.. ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းကိုမေးမိတယ်..အဲ့ဒီ Suspended(ဆိုင်းငံ့) ထားတဲ့ကော်ဖီတွေကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့...သူကလည်း ငါ့သူငယ်ချင်းမင်းဆက်စောင့်ကြည့်ကွာ တွေ့လိမ့်မယ်လို့ပြောတော့ ကျွန်တော်လည်းဘာမှဆက်မမေးမိဘဲ ရောက်လာတဲ့ကော်ဖီကို သောက်နေလိုက်တယ်...စိတ်ထဲမှာတော့ ဘာပါလိမ့်ဆိုတာကိုစဉ်းစားနေမိတယ်... နောက်တော့ မိန်းကလေးနှစ်ယောက်ရောက်လာတယ်..ကော်ဖီနှစ်ခွက်မှာတယ်..ပိုက်ဆံရှင်းပြီးပြန်ထွက်သွားတယ်...နောက်တစ်ခါ ရှေ့နေသုံးယောက်ရောက်လာတယ်...ကော်ဖီ(၇)ခွက်မှာတယ်..၃ခွက်က ငါတို့အတွက် ကျန်တဲ့လေးခွက်က suspended(ဆိုင်းငံ့) လို့ပြောပြီး ပိုက်ဆံရှင်းတယ်... ကျွန်တော် တော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားမိနေပြီ...ဒီ suspended (ဆိုင်းငံ့)ကော်ဖီဆိုတာဘာလဲ??? အတွေးတွေများရင် ဆိုင်ရှေ့က ရှုခင်းအလှအပလေးတွေနဲ့ ဖြတ်လျှောက်သွားတဲ့လူတွေကို ကြည့်နေမိတယ်...အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ အ၀တ်အစားနွမ်းနွမ်းပါးပါးနဲ့ သူတောင်းစားပုံစံလူတစ်ယောက် ဆိုင်ထဲဝင်လာတယ်...မ၀ံ့မရဲနဲ့ counter နားကပ်သွားပြီး Suspended Coffee(ဆိုင်းငံ့) ကော်ဖီလေးများ ရှိသလားဗျာ..တဲ့...ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်သွား တယ်...ဆိုင်ရှင်က ပြုံးပြပြီး ကော်ဖီတစ်ခွက်ပေးလိုက်တယ်...ဆိုင်လေးရဲ့ ချောင်ကျကျတစ်နေရာမှာ အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကော်ဖီ ထိုင်သောက်နေလေရဲ့....ကျွန်တော် အားလုံးကိုရှင်းသွားပါပြီ..လူတွေက သူတို့ စား သောက်ဖို့အပြင် နွမ်းပါးတဲ့သူတွေနဲ့ မတတ်နိုင်တဲ့သူတွေအတွက် coffee နဲ့ စားစရာသောက် စရာတွေကို Suspended (ဆိုင်းငံ့)အဖြစ် ငွေကြိုရှင်းခဲ့ကြတာပါ...
ဒီရိုးရာဓလေ့ဟာ အီတလီနိုင်ငံ (Naples City)ကနေစခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ အခုတော့ နိုင်ငံတော်တော်များများကိုပြန့် နှံ့လို့နေပါပြီ..တစ်ချို့နေရာတွေမှာဆိုရင် ကော်ဖီတင်မကပဲ Sandwich ဒါမှမဟုတ် စားစရာတွေတောင် Suspended အနေနဲ့ရှိနေပါပြီ...
ကျွန်တော်ဒီစာလေးကိုဖတ်မိတဲ့အချိန်တုန်းက မျက်ရည်တောင်လည်မိတယ်..သူတို့ရဲ့ လူသားချင်းစာ နာမှု..ကြင်နာမှု၊နွေးထွေးမှု မေတ္တာဓာတ်တွေကို ကျွန်တော့်စိတ်ကို လှုပ်ခတ်စေလို့ ကျွန်တော် ဘာသာပြန်ပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.. ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဒဘာသာမြန်မာနိုင်ငံမှာလဲ ဒီလို ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အလေ့အထလေးတွေရှိရင်အရမ်းကောင်းမှာပဲလို့ကျွန်တော်တွေးမိတယ်... ညှိုးနွမ်းနေတဲ့မျက်နှာတွေနဲ့ ကလေးငယ်တွေ..သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ ညီငယ်ညီမငယ် အဖေအိုအမေအိုကြီးတွေ လမ်းဘေးမှာ အော်ဟစ် ညည်းညူတောင်းခံနေမယ့်အစား ထမင်းဆိုင်တစ်ဆိုင်သွားပြီး ငွေကြိုရှင်းထားတဲ့ ထမင်း တစ်ထုတ်လောက်ရှိမလားဆိုပြီး တောင်းခံ ရတာ ပိုပြီးသိက္ခာရှိမယ်ထင်တယ်...
ပြောနေတာကြာတယ်..လက်ထဲမှာ ပိုက်ဆံ၃၀၀-၄၀၀ လောက်ပိုနေလို့ ထမင်းတစ်ထုတ်နဲ့ အရွက်ကြော်သို့ ကြက်ဥကြော်လောက်နဲ့ ငွေကြိုရှင်းထားရင်း ဗိုက်ဆာနေတဲ့ ညီငယ်ညီမငယ်တွေနဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေကို ကြင်နာမှုနဲ့ နွေးထွေးမှုနဲ့ ကုသိုလ်ယူတဲ့ အလေ့အထလေးတွေ စတင်လိုက်ကြရအောင်ဗျာ...
ထမင်းဆိုင်၊လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေ တစ်ခြား မုန့်နဲ့စားသောက်စရာပိုင်ရှင်တွေ ကလည်း ဒီကုသိုလ်ရတဲ့ ဓလေ့...အလေ့အထလေး မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်မြောက်သွားအောင် တောင်းတဲ့သူတွေ များရှိခဲ့ရင် မျက်နှာမရှုံ့ဘဲ ကြင်နာတဲ့အကြည့်နဲ့ ၀န်ဆောင်မှုပေးနိုင်ကြပါစေလို့ ကျွန်တော် တောင်းဆိုပါတယ်...
ဒီအလေ့အထလေးကို မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်မြောက်လာအောင် တစ်ယောက်တစ်အား ၂၀၀-၃၀၀ ကစလို့ ၀ိုင်းဝန်း ကူညီကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်...
• This story has been circulating over the internet
recently with unknown origin.
• No accounts for how long or widespread the
Italian tradition of "suspended coffee" or "caffè
sospeso" might be.
• A March 2013 report from Agence France Presse
about it also described the practice as an old Italian
tradition that had since taken root in Bulgaria.
• The image commonly used to accompany the
"suspended coffee" tradition posted on social media
sites is an unrelated photo by Washington Post last
March 2012 featuringahomeless man named Cal
Walker sippingacoffee atadiner.
• The latest example of embracing this Italian
tradition is Bulgaria with more than 150 coffee
shops across the country devoted to helping the
ရှမ်းပြည်နယ် လားရိုးမြို့မှာ ဓါတ်ဆီလောင်းမီးရှိုခံခဲ့ရ သူဆေးရုံကဆင်းပြီ
အစ္စလာမ္မစ် အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်သမားများပုံစံ ဝတ်ဆင်ထားသူများ က ထိုင်း ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း သက်ဆင်ရှင်နာဝပ်ရဲ့ ဓာတ်ပုံကို ကိုင်ဆောင်ကာ ၂၀၀၄ ခုနှစ်က ထိုင်းတောင်ပိုင်းဒေသတွင် မွတ်ဆလင်များကို သတ်ဖြတ်ခဲ့မှု အတွက် ပြန်လည် လက်စားချေ မည်ဟု ခြိမ်းခြောက် ပြောဆို ထားတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်မှာ ဇူလိုင်လ ၂၇ ရက်နေ့က YouTube မှ တစ်ဆင့် ပေါ်ထွက်လာ။
တာဝါတိုင်ရော ဟုတ်ရဲ့လား ရေစင်ကြီး ဖြစ်နေအုံးမယ်
၉၅ ခုနှစ်လောက်က ဖြစ်မည် ထင်သည်။ မောင်ပွ တို့ အိမ် တယ်လီဖုန်းလျှောက်တာ ကျသဖြင့် ဆက်သွယ်ရေးရုံးက ဖုန်းလာတပ်ပေးသည်။ ဖုန်းအနီရောင် အပေါ်တွင် 52000 ဟု ရေးထားသည့် ဖုန်းခွံ တစ်ခု ပါတစ်ခါတည်း တပ်ပေးသွားသည်။ ထိုစဉ် အခါက တယ်လီဖုန်းဆိုတာ အိမ်တိုင်းမှာ မရှိ။ တယ်လီဖုန်း ရှိသော အိမ်ဆိုတာ ဟိုးအရင် ခေတ်က ဖယ်မလီယာ ကားဝယ်စီး နိုင်တဲ့သူတွေလို ရှားပါးလှသည်။ မောင်ပွ တို့အိမ်လည်း မျောက်အုန်းသီး ရသလို ထိုဖုန်းအား တစ်နေ့ တစ်နေ့ ဖုန်သုတ်ရတာ တစ်မျိုး ပုဝါအုပ်ပေးရတာ တစ်မျိုး နှင့်။ သည့်နောက် အဖေ လုပ်သူက နောက်ဖုန်းခွံ တစ်လုံးဝယ်ကာ အိမ်နောက်ဖေး တွင် တပ်ကာ Extension သဘော ထားပေးလေသည်။ တစ်ခါတစ်လေ အိမ်နောက်ဖေး မှာရောက်နေလို့ ဖုန်းလာနေပါက အိမ်ရှေ့သို့ ပြေးသွားရန် မလိုဘဲ အိမ်နောက်ဖေး ဖုန်းမှ ပြောနိုင်ရန် တပ်ဆင်ထားပေးခြင်း ဖြစ်လေသည်။ မောင်ပွ တို့မှာ ဖုန်းလာပါက ပြေးပြေးကိုင်ပြီး ဖြေရတာ အမော။ ကစားစရာ အရုပ်တစ်ရုပ် ယခုမှ အိမ်ပေါ်ရောက်နေသကဲ့ သို့ ဖြစ်နေလေတော့သည်။ တစ်နေ့ ဖခင် လုပ်သူ အိမ်သာတက်နေစဉ် မိခင်လုပ်သူက အိမ်ရှေ့မှာ ဘုရား ရှိခိုးနေလေသည်။ ထိုစဉ် ဖုန်းဝင်လာသည်။ မောင်ပွမှာ အိမ်က ကြိမ်းထားသဖြင့် ဖုန်းလာလျှင် မကိုင်ရဲတော့ဘဲ အိပ်ခန်းထဲတွင်သာ ခွေနေရလေသည်။ အတန်ကြာအောင် ဖုန်းခေါ်သံ မြည်သော်လည်း ကိုင်မည့်သူကမရှိ။ အမေကလဲ ဘုရားရှိခိုးလို့ မပြီးသေး အဖေကလဲ အိမ်သာထဲက ထွက်မလာသေး။ ခဏကြာသော် အဖေ အိမ်သာထဲမှ ကမန်းကတန်း ထွက်လာကာ အိမ်နောက်ဖေးရှိဖုန်းအား ကောက်ကိုင်လေသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် မိခင်လုပ်သူက ဘုရားအားဦးချတောင်းပန်ကာ အိမ်ရှေ့ ဖုန်းအား ကောက်ကိုင်လေသည်။ တစ်ဆက်တည်း မှာပင် သူတို့ ၂ယောက်ကိုင်လိုက်သော အချိန်တွင် ဟိုဘက်မှ ခေါ်သော ဖုန်းမှာ အချိန်စေ့ သဖြင့် လိုင်းကျသွားလေ၏။
“ ဟဲလို ဟုတ်ကဲ့ ပြောပါ”
“ ငင် အဲ့ဘက်က အရင်ခေါ်တာလေ”
အမှန်က ခေါ်ဆိုသော ဖုန်း ကျသွားသဖြင့် အရှေ့ဖုန်း နှင့် အနောက်ဖုန်း အသံမှာ ဒိုးယိုပေါက်ကြားရခြင်း ဖြစ်လေရာ မိဘ နှစ်ပါးမှာ ထိုကဲ့သို့ ဖြစ်ကုန်ကြခြင်း ဖြစ်လေတော့သည်။ ဖုန်းထဲမှာဆိုတော့ တစ်ယောက်အသံ တစ်ယောက်မှတ်မိဟန်လဲ မတူ။
“ ဟာဗျာ ကြောင်တောင်တောင်နဲ့ ခင်ဗျားခေါ်လို့ ကျုပ်ကိုင်တာလေ”
“ အောင်မာ သူကပဲ ပြောရတယ် ရှိသေး ရှင်အရင်ခေါ်လို့ ကျွန်မမှာ ဘုရားတောင် ဖြောင့်အောင်မရှိခိုးနိုင်ဘဲ ထလာရတာ”
“ ဟေ့ ဒီမှာ ခင်ဗျား ဗြောင်လိမ် ဗြောင်စား လာမလုပ်နဲ့ ဘာလဲ မိန်းမ ဖုန်းသရဲလား”
“ အောင်မာ အောင်မာ ရှင်သာ ဘယ်က ဖုန်းဘီလူး မှန်းမသိ လာအကြောင်ရိုက်မနေနဲ့”
မောင်ပွ မှာ အိပ်ခန်းထဲမှ အရှေ့မှ မိခင်လုပ်သူ အသံနှင့် အနောက်မှ ဖခင်လုပ်သူ အသံ တို့အား အတိုင်းသားကြားနေရလေရာ တစ်ခုခုတော့မှားနေပြီဆိုတာ သိလိုက်သည်။ အော် သူတို့ စကားများနေတာပဲနေမှာပါလေ ဟုတွေးကာ ပြန်ခွေနေလိုက်သည်။
“ ဟေ့ ဒီမှာ ဖုန်းထဲမှာ လူမမြင်ရဘူးဆိုပြီး လာစွာမနေနဲ့ အမိ ခင်ဗျား ကျုပ်အကြောင်းမသိသေးဘူးထင်တယ်”
“ အောင်မာ ယောက်ျားကြီးတန်မဲ့ နှုတ်သီးကလဲ ကောင်းပါ့ ကြောက်မယ်များထင်နေလား လာခဲ့စမ်းပါ”
အင်းးးးးးးးးးမှားတာတော့ အတော့်ကိုမှားနေပြီ။ ဘာမှားနေမှန်းလဲ မသိ။
“ ဒီမယ် ညောင်နာနာ အသံနဲ့ လာရန်တွေ့မနေနဲ့ အပြင်မှာတွေ့လို့ကတော့ ခါးရိုးကနေ ရိုက်ချိုးပြီး သွားကြားထိုးပစ်လိုက်မယ်”
“ အမယ် လာခဲ့စမ်းပါ ထမိန်နဲ့ ခေါင်းပြေးစွပ်ပြီး ၀ါးရင်းတုတ်နဲ့ ပဲ လှိမ့်တွယ်ပလိုက်မယ်”
“ တယ် ဒီအမျိုးသမီး အတော်စွာတာပဲ ဟေ့ဒီမှာ ကျုပ်ကို ဖွန်လာကြောင်နေတာ မဟုတ်လား ဆောရီးပဲ ကျုပ်မှာက သားနဲ့ မယားနဲ့
“ အလို ရာရာစစ ရှင်သာ ကျုပ်ကို လာအကြောင်ရိုက်နေတာ ကျုပ်မှာလဲ လင်နဲ့ သားနဲ့”
ဘုရား ဘုရား လုံးဝ မှားနေပြီ ဆိုတာ သိလိုက်ပြီ။ ဘယ့်နှာလုပ်လို့ ငါကပါ ဖုန်းထဲ ကန့်လန့် ကန့်လန့် ပါနေရတာပါလိမ့်။ မဖြစ်ချေတော့ ထွက်ပြောမှ ရတော့မည်။
“ အဖေ အဖေ ဟိုလေ”
“ ဟာ အတော်ပဲ လာခဲ့ ရော့ ဒီမှာ ပြောလိုက်စမ်း ဒီမှာ ကျုပ်သား ခင်ဗျား မယုံမှာစိုးလို့ ပြောလိုက်စမ်း ငါ့သား ဒီမှာ မင်းအဖေကို လာကြောင်နေတယ်”
“ ဟွတ် ဟဲလို ငင် ဟုတ်ပါဘူး”
“ အလိုတော် ဘယ်က သောက်ကလေးက ပါလာရပြန်တာတုန်း “
ငင် တေပါဘီ အမေရေ အမေ့သားလေ ။ သို့နှင့် ဖခင်လုပ်သူအား ဖုန်းခွက် ပြန်ပေးကာ အရှေ့မှ မိခင်လုပ်သူကိုပဲ ရှင်းပြရန် အရှေ့သို့ ထွက်လာခိုက်
“ ဟော အတော်ပဲ ဟော့ဒီမှာ ကျုပ်သား ရှင်ဒိုးလိုက်တော့ လာစမ်း ငါ့သား ရော့ ပြောလိုက်စမ်း ဒါကျနော့် အမေလို့”
“ ဟွတ် ဒါကျနော့် အမေဗျ ငင် ရှုပ်ကုန်ပြီ”
“ ဘာမှ မရှုပ်ဘူး ပေးစမ်း အဲ့ဖုန်းခွက် ဒီမှာ ရှင် သတ္တိ ဒီလောက်ရှိနေရင် အိမ်ကို လာခဲ့စမ်းပါ ကျုပ်ယောက်ျားနဲ့ တွေ့သွားမယ်”
“ အေး လာတယ် လာတယ် ပြောစမ်း လိပ်စာ”
“ ( ) ရပ်ကွက် ( ) လမ်း အိမ်နံပါတ်( ) “
“ အေး လာပြီ အခု ငင် ဒါငါ့အိမ်နားကပဲဟ”
“ အော် ဒီအိမ်နားကကိုး လာခဲ့စမ်းပါ”
“ အေး လာပြီ ငင် ဟုတ်သေးပါဘူး ဒါငါ့အိမ် လိပ်စာပဲ”
သည်တွင် အမေလုပ်သူက အဖေ လုပ်သူ အသံအား အနဲငယ် မှတ်မိလာသကဲ့သို့ရှိလေသည်။ အဖေလုပ်သူမှာလဲ ထိုကဲ့သို့ပင်။
“ ဟိုလေ အခုပြောနေတာ ကိုကျော် လား မသိဘူးညော်”
“ ဟွတ်ပါတယ် အဲ့ဘက်က မ၀င်း လားမသိဘူးညော်”
“ ငင် ကိုကျော် ကျွန်မ ရှင့် မိန်းမလေ”
“ ငင် မ၀င်း ငါ မင်းယောက်ျားလေ”
ခွီးးးးးးးးးးးးအခုမှ မိတ်ဆက်နေလိုက်ကြတာ။ ပြီးမှ အဖေက အရှေ့ကို ထွက် အမေက အိမ်နောက်ဖေးကို အ၀င် အလယ်မှာဆုံကြ။ ၂ယောက်သား မျက်နှာချင်းလဲ ဆိုင်ရော အိနြေ္ဒ တောင်မဆယ်နီုင်ဘဲ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် လက်ညှိုးထိုးကာ ရီကြတော့သည်။ အင်းးးးးးးးးခုနကတော့ သတ်တော့မယ် ဖြတ်တော့မယ်နဲ့။
၂၀၀၃ လောက်ကျတော့ ဟန်းဖုန်းလေးတွေ ခေတ်စားလာသည်။ မောင်ပွ အမေက ၂၀၀၅ လောက်လဲ ကျရော မောင်ပွအား ဟန်းဖုန်း တစ်လုံး ၀ယ်ပေးလေသည်။ ထုံးစံ အတိုင်း မောင်ပွ တစ်ယောက် မျောက်အုန်းသီး ရပြန်သည်။ တစ်နေ့တော့ မောင်ပွ အိမ်ပြန်ရမည့် အချိန် ကျော်သွားသည်။ ဘယ်ရောက်နေလဲ ဆိုတော့ တာမွေ ပလာဇာ အောက်ထပ်က နိုက်ကလပ် ထဲ မြူးတူးပျော်ပါးနေခြင်း ဖြစ်လေရာ အိမ်ြ့ပန်ချိန် ကျော်သွားမှန်း သတိမထားမိ။ ထိုစဉ် အိမ်က ဖုန်းဝင်လာလေသည်။
“ တီ တီ တီ တီ”
ငင် ဒါအိမ်က ဖုန်းပဲ။ သွားပြီ အိမ်ပြန်ချိန် ကျော်သွားတာကိုး။ မဖြစ်ဘူး အပြင် အမြန်ထွက်မှ။ ထိုစဉ် နောက်တစ်ခေါက် ဖုန်းထပ်မြည်လာပြန်သည်။
ဒုက္ခပဲ။ ဒီအချိန် ထကိုင်လိုက်ရင် သီချင်းသံတွေ ကြားကုန်လိမ့်မည်။ ကိုင်လို့ မဖြစ်။ အပြင် ပြန်ထွက်ကာ ဆိုက္ကားတစ်စီးငှားကား အမြန်ပြန်လာရသည်။ လမ်းတွင်
အင်း မကိုင်ရင် သံသယ ပိုကြီးထွားတော့မည်။ ဘယ်ရောက်နေလဲ ဆိုပြီး။ ကြံစမ်း မောင်ပွ ကြံစမ်း
“ တီ တီ တီတီ”
“ လူကြီးမင်း ခေါ်ဆိုသော တယ်လီဖုန်းမှာ ဆက်သွယ်မှု ဧရိယာ ပြင်ပ သို့ ရောက်ရှိနေပါသဖြင့် ခေါ်ဆို၍ မရနိုင်ပါ ခင်ဗျာ”
ဟိုဘက်မှ အမေလုပ်သူ ကြောင်သွားသည်။ ထို့နောက် အနောက်သို့ လှည့်ကာ
“ ဟဲ့ ပြန်ဖြေတာက ယောက်ျားလေး ပြောင်းသွားပြီတော့”
မတတ်နိုင်။ ဖုန်းပြန်ချ လိုက်သည်။ ထိုစဉ်
ရော ခေါ်ပြန်ပြီ။ ဧရိယာ ပြင်ပ ရောက်နေပါတယ်ဆိုမှ။ မောင်ပွ ကောက်ကိုင်လိုက်သည်။
“ လူကြီးမင်းခေါ်ဆိုလိုသော တယ်လီဖုန်း နံပါတ်အား ခေါ်ဆိုနိုင်ရန် သုည ကို နှိပ်ပါ”
“ သုည ကို နှိပ်တဲ့ ကဲ နှိပ်တယ်ဟယ်”
“ တူ တူ တူ တူ”
“လူကြီးမင်းခေါ်ဆိုလိုသော တယ်လီဖုန်း နံပါတ်အား ခေါ်ဆိုနိုင်ရန် သုည ကို နှိပ်ပါ သုည နှိပ်ပြီးပါက ဇီးရိုးကို နှိပ်ပါ”
“ ဇီးရိုး ဇီးရိုးက ဘယ်မှာလဲ ဆိုတော့ ငင် သုညနဲ့ ဇီးရိုးက တူတူပဲ မဟုတ်ဘူးလား ယောက်ျား”
“ ငင် မှားဘီဟ”
အမေလုပ်သူ မှ အဖေလုပ်သူအား လှမ်းပြောနေသည်ကို အတိုင်းသား ကြားနေရသည်။ မှားပြီ။ ဖုန်းအား ဂွပ်ကနဲ ပြန်ချလိုက်ရသည်။ တော်သေးသည်။ အိမ်နဲ့ တာမွေပလာဇာက သိပ်မဝေးလို့။ အမေလုပ်သူ ပတ်လည်ရိုက်နေစဉ်မှာပင် အိမ်ပြန်ရောက်တော့သည်။
“ ဟဲ့ နင်ဘယ်ရောက်နေတာလဲ ဧရိယာ ပြင်ပပဲ ဖြေနေတယ် ငါ့ကို ဘာတွေ ခိုင်းမှန်းလဲ မသိဘူး အော်ပရေတာ အကောင်”
“ ဒီဖုန်းတွေက တစ်ခါတစ်လေ အဲ့လိုပဲ ကြောင်တတ်တယ်ဗျ”
အခုများတော့ မောင်ပွ ကိုယ်တိုင် ဖြေစရာ မလိုတော့။ MPT ကျေးဇူး ကြီးမားလှပါဘိ။ ဖြေစရာ မလိုအောင်ပင် သူ့ဟာသူ ဧရိယာ ပြင်ပ ရောက်နေတော့သည်။ တစ်လောက မိခင် လုပ်သူ မှတ်ပုံတင် နံပါတ် အား ကိုယ်ရေး မှတ်တမ်းတွင် ဖြည့်ရန် လိုသဖြင့် ဖုန်းဆက်မေးတော့
“ ဟဲလို အမေလား သားပါ အမေ့”
“ တူ တူ တူ တူ”( ဖုန်းကျသွားသံ)
ငင် ကျသွားပြီ။ နောက်တစ်ခေါက် ပြန်ခေါ်
“ တူ တူ တူ တူု”
အိမ်းးးးးးးးခြောက်ခေါက်လောက်ခေါ်မှ ၀ါကျ တစ်ကြောင်း ပြည့်စုံလေသည်။
“ အေး ရေးထား ၁၂/ တမန(နိုင်) ကျလိ ကျလိ ဝေါ် ၀ွီ ဒရှု ဒရှု”
“ ငင် အမေ သေနတ် ပစ်နေတာလား”
“ မဟုတ်ဘူးဟေ့ လိုင်း ပြတ်နေတာ ပြန်ပြောမယ် ၁၂/ တမန(နိုင်) ဝေါ် ၀ွီ ကျွလိ ကျွလူး”
“ အမေ့ အသံက စက်ရုပ်သံ ဖြစ်နေတယ်”
“ ဟဲလို ကြားကျွီ ကကျွီ လား”
“ ငင် အမေ ဘာတွေ ပြောနေတုန်း”
“ ဟဲ့ ငါ စကားပဲပြောနေတာ နင့်ဘက်က လိုင်းမကောင်းလို့နေမယ် ဘယ်နေရာကနေ ပြောနေတာတုန်း”
“ တာဝါတိုင် အောက်က”
“ ငင် ဟဲ့ တာဝါတိုင်ရော ဟုတ်ရဲ့လား ရေစင်ကြီး ဖြစ်နေအုံးမယ်”
“ မသိဘူး အမေ တာဝါတိုင်လို့တော့ ထင်တာပဲ ရေစည်တော့ မတွေ့ဘူး မီးလုံးလေးလဲ လင်းနေတယ်”
“ အော် ဒါဆို တာဝါတိုင် သေချာတယ်"
" တော်ပါဘီ အမေရာ မှတ်ပုံတင် နံပါတ်ကို မက်ဆေ့နဲ့ပဲ ပို့လိုက်တော့”
“ အေး ပို့လိုက်မယ် နေအုံး ဟိုတလောက ငါပို့လိုက်တဲ့ မက်ဆေ့လဲ ပြန်မပို့ပါလား”
“ မရဘူး ဘာမက်ဆေ့လဲ”
“ ငင် အိမ်ဘေးက အဒေါ်ကြီး နေမကောင်းလို့ ဘာဆေးသောက်ရမလဲမေးခိုင်းလို့ မေးတာလေ”
“ မရဘူး “
“ ဒါဆို ဒီမက်ဆေ့ ဘယ်ရောက်သွားသတုန်း”
“ မော်လမြိုင်လောက်တော့ ရောက်လောက်ပြီ ထင်တယ်”
“ အော် ဒါဆို မနက်ဖန်လောက်တော့ နင့်ဆီ ရောက်မှာပါ”
“ အခုရော အဒေါ်ကြီး အခြေ အနေ ဘယ်လိုလဲ”
“ ရက်လည်ဆွမ်း တောင်သွပ်ပြီးပြီ”
ကျနော် စဉ်းစားမိနေတာကို ပြောပြချင်တယ် ။ တကယ်တော့ ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နောက်လာမဲ့ -၂၀၁၅-ခုနှစ်အတွက် ရွေးကောက်ပွဲ ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲ ဆိုတာကို လက်ရှိသမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ဥရောပခရီးစဉ်မှာ ဖြေဆိုသွားတာကြားလိုက်ရတယ် ။ သူစဉ်းစားနေတာက အဲဒီရွေးကောက်ပွဲကာလကို မဟုတ်ဘဲ ခုမျက်မှောက်ကာလမှာ ဘယ်လိုလုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ရမယ် ဆိုတာကိုဘဲ စဉ်းစားပြီး အလုပ်လုပ်နေပါတယ်တဲ့။ ဒီစကားကို ကျနော် ထောက်ခံမိတယ် ။ မှန်တယ်ဗျာ ။ တကယ်ဆောင်ရွက်ရမှာက ပကတိမျက်မှောက် အခြေအနေတွေကိုဘဲလေ ။ ခုတော့ -၂၀၁၅-ကို ကြည့်ပြီး ပါတီစုံရွေးကောက်ပွဲ ကာလမှာ ပါတီအနိုင်ရရှိရေးလား -လွပ်လွပ်ပြီး တရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်မှာလား - တိုင်းရင်းသားမဟုတ်သူများကို အဖြူရောင်ကဒ်ပေးပြီး မဲပေးခွင့်ပေးတာကို ကန့် ကွက်ထားရမှာလား - အဲဒီလိုနယ်မြေကို အနက်ရောင်နယ်မြေအဖြစ် သတ်မှတ်ရမှာလား -စတာတွေအပြင် ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ဆိုင်တဲ့တိုင်းရင်းသားမဟုတ်သူများနှင့် နိုင်ငံသားမဟုတ်သူများကို ရွေးကောက်ခံ ကိုယ်စားလှယ်များအဖြစ် မပြုလုပ်ရေးဆိုတာတွေကို ပြုလုပ်ရလိမ့်မလားတိုတာတွေကို မစဉ်းစားဘဲ ပြောနေကြတာကို သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က အရိပ်အမြွက် ပြောလိုက်တာ ထင်ပါတယ် ။ ခုတော့ -၂၀၁၅- ရွေးကောက်ပွဲလုပ်လို့ ရှိရင် သမ္မတဖြစ်ချင်သူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့သူရဦးရွှေမန်းတို့ က ကြွေးကြော်နေကြတော့ စဥ်းစားမိတာလေး ပြောချင်တယ် ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သာ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ခဲ့ ရင် ပြန်ပြီးတော့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ပါဝင်လာမှာပါ ။ အဲဒီနောက် ဥပဒေတွေပြဋ္ဌန်း ပြောင်းလဲ ပြင်ဆင်လို့သမ္မတဖြစ်သွားရင် အစစအရာရာတွေ ပြောင်းလဲလာမယ်လို့ ကျနော်ထင်တယ် ။ ပထမအချက်ကတော့ နိုင်ငံအခေါ်အဝေါ်ပြသနာ ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ထင်ရတယ် ။ ခုလက်ရှိသုံးစွဲ ခေါ်ဝေါ်နေတာက ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်လို့ငွေစက္ကူကအစ ရုံးသုံးဝေါဟာရတွေမှာ သုံးစွဲခေါ်ဝေါ်ကြတယ် ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သာ သမ္မတဖြစ်လာရင်တော့ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ ဗမာနိုင်ငံတော်လို့ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲ အမည်ပြောင်းရပါတော့မယ် ။ ဒီလိုသာ အမည်ပြောင်းလဲ ခေါ်ဝေါ်ရမယ်ဆိုရင် ဗမာသမ္မတနိုင်ငံတော်ကို တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေက လက်သင့်ခံကြပါ့မလား ဆိုတာ စဉ်းစားမိပါတယ် ။ ဘာဘဲပြောပြော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဗမာဆိုတဲ့ဝေါဟာရကို ကမ္ဘာပါတ် ခရီးသွားခဲ့ ရာမှာ ထင်ထင်ရှားရှား အသုံးပြုခေါ်ဝေါ်သူဆိုတော့ ပြည်ထောင်စုသမ္မတဗမာ့နိုင်ငံတော်လို့သမ္မတအာဏာနဲ့ပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်ရမည်ဆိုရင်တော့ ပြသနာက ကြီးမားသွားစရာတွေ ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ် ။
ဒါ့ကြောင့်မို့ လို့ခုကတည်းက ဒီလိုနာမည်မျိုးကို ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲရန် ရှိမရှိဆိုတာမျိုးကအစ သတိထားကြရလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ် ။ သူရဦးရွှေမန်းကျပြန်တော့လဲ စစ်အာရှင် အစိုးရက ချမှတ်ထားခဲ့ တဲ့လမ်းစဉ်ကို မဆောင်ရွက်ရင် သူတို့ ညံ့ရာကျမယ် လို့ ပြောထားတော့ သူရဦးရွှေမန်းသာ သမ္မတဖြစ်လို့ ကတော့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေ၀င်း- ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသန်းရွှေတို့ ထက် ဆိုးဝါးမဲ့လက္ခဏာ ဖြစ်မယ်လို့ယူဆရပါတယ် ။ လွန်ခဲ့ သော လပိုင်းလောက်က တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင် ခွန်ထွန်းဦးက ပြောသွားတာ ထင်ပါတယ် ။ သူက -၂၀၀၈-ခုနှစ် နိုင်ငံတော် ဖွဲ့ စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေကို စာအုပ်မျက်နှာဖုံးကအစ ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်တယ်လို့ပြောဆိုသွားတာ အမှတ်ရနေမိတယ် ။ ခုတော့လဲ နိုင်ငံတော် ဖွဲ့ စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေကို လေ့လာသုံးသပ်ရေးကော်မီတီကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအပါအ၀င် ဖွဲ့ စည်းပေးထားလိုက်ပြီလို့ကြားသိရပါပြီ ။ ခက်နေတာက ဒီနေရာမှာ ပြောစရာစကားတွေက အများကြီး ရှိလာနေပါတယ် ။ ကျနော်သိရသေလာက် -၂၀၀၈-ခုနှစ် နိုင်ငံတော်ဖွဲ့ စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေကို -၂၀၁၀-ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခဲ့ တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတိုင်းက အချိန်ရရင်-ရခိုက် သူတို့ ဟာ -၂၀၀၈-ခုနှစ် ဖွဲ့ စည်းပုံကို မကြိုက်ဘူးလို့ပြောဆိုတတ်ကြတာ သတိထားမိပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့အဲဒီနိုင်ငံရေးပါတီတိုင်းဟာ -၂၀၀၈-ခုနှစ် နိုင်ငံတော်ဖွဲ့ စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေကို ဦးလည်မသုန် ထမ်းရွက်ပါမည်လို့ကျမ်းသစ္စာဆိုခဲ့ ကြရသူများဖြစ်ပါတယ် ။ သို့ သော်လဲဘဲ အဲဒီနိုင်ငံရေးပါတီတွေဟာ -၂၀၀၈-ခုနှစ် နိုင်ငံတော်ဖွဲ့ စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေကို မကြိုက်မနှစ်သက်ဘူးဆိုရင် မိမိတို့ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ပြည်သူတွေအတွက် အသုံးတည့်တဲ့ဥပဒေမူကြမ်းတွေကို ရေးသားတင်ပြရန် ရှိနေသင့်ပါတယ် ။
တစ်ခါက အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်က ဦးညဏ်ဝင်းက ဖွဲ့ စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံ ဥပဒေကို ရေးဆွဲရင် ဥပဒေအရ အရေးယူခံရနိုင်တယ်လို့အစိုးရက ထုတ်ပြန်ထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ပြောဆိုသွားတာ မှတ်မိပါတယ် ။ ဒါ့ကြောင့်မို့သူတို့ မှာ ရေးဆွဲထားတာ မရှိဘူးပေါ့ ။ ခုတော့ နိုင်ငံတော် ဖွဲ့ စည်းအုပ်ချုပ်ပုံကို လေ့လာသုံးသပ်ရန် ဆိုပြီး ကော်မီတီ ဖွဲ့ ထားတယ် ဆိုတော့ ဘာကိုများ လေ့လာသုံးသပ်ကြမည်နည်းဆိုသော မေးခွန်းက ပေါ်ထွက်လာပြန်ပါတယ် ။ လေ့လာသုံးသပ်မည်ဆိုခြင်းမှာ -၂၀၀၈-ခုနှစ် နိုင်ငံတော်ဖွဲ့ စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံ ဥပဒေစာအုပ်ကို စားပွဲခုံပေါ်တင်ပြီး ၀ိုင်းဖတ်ကြပြီး တစ်ယောက်တစ်ပေါက် ပြောဆိုကြမည်လား ဆိုသော မေးခွန်းကို မေးချင်လာမိပါတယ် ။ အရေးကြီးသော နောက်မေးခွန်း တစ်ခုမှာ နိုင်ငံတော် ဖွဲ့ စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံ ဥပဒေကို ပြင်ဆင်ခြင်း ၊ ဖြည့်စွက်ခြင်းအတွက် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာ တက်ရောက်နေကြတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တော်အမတ်မင်းများက ဆွေးနွေးအကြံပြုလို့မရပေဘူးလားဆိုတာ မေးခွန်း ထုတ်စရာ ဖြစ်ပါတယ် ။ သူတို့ တွေလည်း လူပါဘဲဟု ပြော၍ရပါတယ် ။
တစ်နေ့ က ရခိုင်ပြည်နယ် မန်အောင်မြို့ နယ်က ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးက သူ့ အနေနဲ့ရန်ကုန်ရောက်တိုင်း တစ်ကြိမ် တစ်ခါမျှ မသွားမလည်ပါတ်ဖူးတဲ့ကြည့်မြင်တိုင်က အမှိုက်ပုံကို ဘယ်တော့လောက် စည်းကမ်း ကျနစွာနဲ့သိမ်းဆည်းပါမည်လဲဆိုသော မေးခွန်းကို မေးတာကြားလိုက်ရပါတယ် ။ သူနဲ့ကြည့်မြင်တိုင်နဲ့ဘာမျှ မပတ်သက်ဘဲ မေးထားတဲ့မေးခွန်းကို ကြားသိရတဲ့လူုတွေအနေနဲ့ဘယ့်လောက်များ လွှတ်တော်ရဲ့စုတ်ပြတ်သတ်နေပုံကို ရွံရှာနေမလဲ ဆိုတာ စဉ်းစားမိပါတယ် ။ တကယ်ဆိုရင် ကြည့်မြင်တိုင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်က မေးသင့်တဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါလျှက်ကယ်နဲ့ခုတော့ ရခိုင်ပြည်နယ် မန်အောင်မြို့ နယ်က လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် မေးမြန်းနေတော့ ဤကား -လွှတ်တော်တည်းဟု ပြောရုံမှအပ ဘာများ ပြောစရာ ရှိပါ့မလဲလို့စဉ်းစားမိပါတယ် ။ အဲဒီလိုကြောင့်ဘဲလားတော့ မဆိုနိုင်ပါဘူး ။ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာ -၂၀၀၈-ခုနှစ် နိုင်ငံတော် ဖွဲ့ စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံ ဥပဒေကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တိုင်း မလေ့လာ မသုံးသပ်ရဘဲ အရည်အချင်း မရှိတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ အခြေအနေကို သိလို့ ဘဲ -၁၀၀- ကျော် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကို လေ့လာဖို့ကော်မီတီတွေ ဖွဲ့ စည်းလိုက်တယ် ထင်ပါတယ် ။
ဒါပေမဲ့လေ့လာသုံးသပ်သည့် ကော်မီတီသာဖြစ်နေတော့ ဒီဥပဒေကို မှား၏ မှန်၏ ကောင်း၏ ဆိုး၏ဟု လက်ဆုပ်လက်ကိုင်ပြမည့် နိုင်းယှဉ်ပြမည့် ဖွဲ့ စည်းပုံဥပဒေများနှင့် ပတ်သက်တဲ့သူတို့ ကိုယ် သူတို့ ရေးဆွဲထားတဲ့အချက်အလက်များ-စာအုပ်စာတမ်းများ-ဘာမျှမပါရှိ၍ ၄င်းလေ့လာသုံးသပ်သောကော်မီတီမှာ အဖြစ်မရှိတာကို စဉ်းစားတိုင်း အဖြေပေါ်နေပါတယ် ။ ကျနော်ဖြစ်စေချင်တာက လေ့လာသုံးသပ်မည့် သူတိုင်း သို့ မဟုတ် နိုင်ငံရေးပါတီတိုင်းမှာ နိုင်ငံတော်ဖွဲ့ စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံ ဥပဒေမူကြမ်းများကို ရေးဆွဲပြီး ကော်မီတီမှာ ပါဝင်သူများက မိမိတို့ ၏ ဖွဲ့ စည်းပုံက ဤသို့ - ဆိုကာ အခြားအဖွဲ့ အစည်းများက တင်ပြလာသည့် ဖွဲ့ စည်းပုံများနှင့် နိုင်ယှဉ်ကြရပါလိမ့်မယ် ။ သို့ အတူ စာအုပ်မျက်နာဖုံးကအစ ပြောင်းလဲရန် သင့်သည်ဟု ဆိုသော ဦးခွန်ထွန်းဦး ပြောဆိုသကဲ့ သို့စာအုပ်မျက်နာကို ခုလို ပြောင်းလဲထားပါ၏ ဟု ပြောဆိုပြင်ဆင်ထားသော ဖွဲ့ စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေစာအုပ်ကို တင်ပြနိုင်ခွင့် များ ရှိနေသင့်ပါတယ် ။ ပြီးတော့ ပြည်ထောင်စုဗမာ့သမ္မတနိုင်ငံတော်၏ နိုင်ငံတော် ဖွဲ့ စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေ မူကြမ်းစာအုပ်နှင့် ယခုလက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ၏ -၂၀၀၈-ခုနှစ် နိုင်ငံတော် ဖွဲ့ စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံ ဥပဒေကို လေ့လာသုံးသပ်သည်သာမက တိတိကျကျ ပြင်ဆင်ရေးဆွဲ နှိုင်းယှဉ်ကြပါရန်နှင့် -အချိန်ကာလအားဖြင့် -၁၅-နှစ်မျှ ရေးဆွဲထားခဲ့ သော -၂၀၀၈-ခုနှစ် ဖွဲ့ စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေကို မည်မျှအတိုင်းအတာအထိ ရေးဆွဲချိန် ကြာမြင့်မည်ဆိုသည်ကိုလည်း ပြည်သူတို့ အား ချပြသင့်ပါကြောင်း မြစ်ဖျားခံသော ရေစီးကြောင်းများအကြောင်းကို တင်ပြလိုက်ရပါတယ် ။။။။။။
နည်းပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်) ကျောင်းသားများ၏ အမှန်တရားပေါ်ပေါက်ရန် ရှင်းလင်းခြင်း
Kyaw Xin Heart's photo.
ဇွန်လ ၂၆ရက်နေ့ ၂၀၁၃ခုနှစ် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ နေ့လည်၁နာရီအချိန်တွင် ကျနော်တို့တက္ကသိုလ်မှ ၇၅%မပြည့်မီသော ကျောင်းသား/သူများ၏ မိဘများကို ပါမောက္ခချုပ်၊ မော်ကွန်းထိန်း၊ ဌာနမှူးများ၊ ဌာနအလိုက် မိသားစုဆရာမများခေါ်ယူတွေ့ဆုံမှု ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါပွဲ၌ ကျောင်းသားများကျောင်းတက်မှန်ကန်ရေး၊ ကျောင်းစည်းကမ်းပိုင်းဆိုင်ရာများ၊ ကျောင်း၏ Academic Plan၊ စာမေးပွဲစစ်မည့်ပုံစံ စသည်တို့ကို ခေါ်ယူတွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းနေ့ ၎င်းအချိန်မှာပင် သုံးထပ်ဆောင် Basement ဒေါင့်ခန်း၊ ချောင်အကျဆုံးဖြစ်သော စာသင်ခန်း 3B/6၌ အဆိုပါစုံတွဲသည် ထိုအရေးကို အခွင့်အရေးတစ်ခုသဖွယ် အသုံးချ၍ မဖွယ်မရာပြုမူဆောင်ရွက်နေသည်ကို ကျောင်းသားတစ်စုမှ တွေ့ရာမှ ဖုန်းဖြင့် Videoရိုက်၍ လူငယ်သဘာဝ နောက်ပြောင်လိုသော သဘောဖြင့် နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်များကို မစဉ်းစားဘဲ အချင်းချင်းဖြန့်ဝေရာမှ အခြားကျောင်းမှ ကျောင်းသားများထံရောက်သွားခဲ့ပြီး အွန်လိုင်းပေါ်တင်ခဲ့သောကြောင့် အဆိုပါ သတင်းမှာ ပျံ့နှံ့သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သတ်၍ ကျောင်းမှ သိလျင်သိခြင်း သက်ဆိုင်ရာမိဘများအား ခေါ်ယူတွေ့ဆုံ၍ ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သတ်ပြီး အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါအသိပေးပုံမှာလဲ မီဒီယာတစ်ခုမှ ဖော်ပြသလို အသိပေးခြင်းမှာလဲ လုံးဝ လုံးဝ မဟုတ်ပါ။ သက်ဆိုင်ရာမိဘများက ၎င်းတို့၏ သဘောဆန္ဒအရ သားသမီးများအား နှုတ်ထွက်စာတင်၍ ကျောင်းမှနှုတ်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။
>>> ကျမက လက်ရှိနည်းပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်)မှာ တက်ရောက်နေတဲ့ကျောင်းသူပါ။ ကျမပြောချင်တာက ဂျာနယ်မှာဖော်ပြတဲ့ သတင်းမှန်သည်ဖြစ်စေ၊ မှားသည်ဖြစ်စေ၊ ဒီစာမျက်နှာပေါ်ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာ ဒီကျောင်းသားအသိုင်းအဝိုင်းကမဟုတ်တဲ့ မိဘပြည်သူတွေ အထင်အမြင်မှားသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီဂျာနယ်ရဲ့ဖော်ပြပုံကိုကြည့်ပါ၊ ကျမကArchကျောင်းသူဖြစ်တဲ့အတွက် အရောင်တွေရဲ့သဘောတရားကို နားလည်ပါတယ်။ ကျမသိတာက ဂျာနယ်တွေမှာ Highlight ဖော်ပြတဲ့နေရာမှာ ကာလာကို အဝါရောင်သုံးပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီလို နက်ပြာရောင်မျိုးကို ယူလေ့ယူထမရှိပါဘူး။ ပြီးတော့ ခေါင်းစဉ်ကိုဖတ်ကြည့်ပါ။ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူ နှစ်ဦး၏ ညစ်ညမ်းဗီဒီယို GTCကျောင်းတွင်ပြသတဲ့။ အဲ့ဒီအသုံးအနှုန်းလေး ဒီတစ်ပေတောင်မရှိတဲ့လက်မပတ်လည်လေးက ကျမတို့ ကျောင်းသူတွေရဲ့ သိက္ခာဘယ်လောက်ထိ ထိခိုက်တယ်ဆိုတာ ကျောင်းသူဖြစ်တဲ့ကျမ အသိဆုံးပါ။
နောက်တစ်ခုရှိပါသေးတယ်။ သတင်းသမားတွေဟာ သိတိုင်း၊ မှန်တိုင်း၊ အကျိုးရှိမှ ရေးသင့်မှရေးသည်တဲ့ ဒါသံတော်ဆင့်ဂျာနယ်ထဲမှာပါတဲ့ သူတို့ရဲ့ ဆောင်ပုဒ်ပါ။ အဲတော့ ဒီသတင်းတွေဟာ မှန်တယ်ပဲထားဦး ဖတ်တဲ့လူတွေအတွက် ဘာအကျိုးမှမရှိရင်မရေးရပါဘူး။ သတင်းသမားတွေမှာလဲ သတင်းသမား ကျင့်ဝတ်တွေရှိမှာပါ။ ဒီစတုတ္ထမာန်တိုင် သတင်းသမားတွေရဲ့ ရင်ထဲမှာတကယ်ရှိပါသလား ပြန်ပြီးတော့ မေးခွန်းထုတ်ချင်ပါတယ်။ ဒီလိုမေးခွန်းထုတ်ချင်အောင်ကိုလဲ ဘာမဟုတ်တဲ့ ဒီလက်မဝက်ဝန်းကျင် Highlightလေးက ကျမတို့ရင်ကို လာထိမှန်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်GTCလို့ပြောတဲ့အတွက် ကျမတို့ နည်းပညာကျောင်းက တစ်ကျောင်းထဲမဟုတ်ပါဘူး။ အားလုံးကစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ Hotဖြစ်နေတဲ့ သတင်းထည့်တာကို နားလည်ပေးနိုင်ပါတယ် အကုန်လုံးက စိတ်ဝင်စားနေကြတယ် ကျောင်းသားတွေထံမှာလဲ လူငယ်စိတ်ဓာတ်၊ လူငယ်ဆိုတာသွေးပူတယ်၊ အဲ့တော့ကျမတို့ ကိုယ်တိုင်ရင်ထဲမှာ ခံစားရတာပေါ့။ ဒီကလောင်ရဲ့ နောက်ကွယ်က ရည်ရွယ်ချက်က ဘာလဲဆိုတာတော့ ကျမမသိဘူးပေါ့။ ဒီရည်ရွယ်ချက် ဘယ်ကိုဦးတည်သွားလဲ မသိပါဘူး။
ကျမတို့ စာမေးပွဲလဲ နီးပါပြီ အရေးကြီးပါတယ်။ ကျမတို့ B.Tech 2nd yr တွေပိုပြီးတော့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီစာမေးပွဲနီးနေတဲ့အချိန်မှာ ဒီကျောင်းသားတွေ မခံချင်ဖြစ်အောင် စိတ်ဆွပြီးတော့ ဘာကိုဦးတည်ချင်တာလဲ။ ကျမတို့ဟာ အင်ဂျင်နီယာကျောင်းသားတွေ စဉ်းစားတတ်တယ် အတွေးအခေါ်ရှိတယ်။ အသုံးချခံမဖြစ်လိုဘူး။ ဘယ်လိုလှည့်ကွက်တွေ ဖြစ်နေလဲဆိုတာ မသိတော့ ဒီလှည့်ကွက်တွေထဲမှာ အသုံးချခံလိုက်ရမှာ စတေးလိုက်ရမှာတော့ ကျမတို့ မခံမရပ်နိုင်ပါဘူး။ အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပေါ့ လုပ်နေတယ်လို့ ခံစားမိတယ်။ ကျမတို့ အခုလို ကျောင်းသားများ အမှန်တရားဖြေရှင်းခြင်းပွဲလေးကို မလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင် ဒီကျောင်းသားထုထဲမှာ မကျေနပ်ချက်တွေကတော့ ရှိနေတာပေါ့။ ဒီလိုမျိုးလုံးဝ သတင်းအမှားကြီးက ကျမတို့ကိုထိခိုက်သွားစေတယ်ပေ့ါ။ ပြီးတော့ ထိခိုက်သွားတယ်ဆိုတာကလဲ သတင်းအမှန်နဲ့မဟုတ်ဘူး သတင်းအမှားနဲ့ပေါ့။ အဲ့ဒါကြောင့် ဒီလိုမျိုး မခံမရပ်နိုင်တဲ့ အရာတွေကြောင့် သိမ်းထားတဲ့ခံစားချက်တွေကို တစ်ယောက်ယောက်ကများ သွားပြီးတော့ သွေးထိုးပေးလိုက်ရင် ဘယ်လိုအခြေအနေတွေ ဖြစ်လာနိုင်သလဲ။ ဒါကျမတို့ စဉ်းစားရမယ်။ ကျမတို့ရဲ့လွတ်လပ်စွာ ပညာသင်ကြားရေးကို မထိခိုက်စေလိုတဲ့ဆန္ဒ ကျမတို့မှာ အပြည့်အဝရှိပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ကျမတို့ တိုင်ပင်ပြီးတော့ ဒီပွဲကို လုပ်လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျမပြောချင်တာ ဒီအချက်အလက်တွေရဲ့နောက်ကွယ်ကနေ ခံစားသွားရတဲ့ ခံစားချက်ပါ။ ပြည်သူတွေက ဒီPrintedလုပ်ထားတဲ့ သတင်းတွေကို အမှန်လို့ထင်သွားပြီ ဒါကဒီလိုပါလားဆိုပြီးတော့ အားလုံးကယုံကြည်အားထားနေကြရတာပါ။ ဒီလိုယုံကြည်နေမှုကို ယုံကြည်မှုကိုအလွဲသုံးစားလုပ်နေတယ်လို့ ခံစားရပါတယ်။ ဒီမှာရှိနေတဲ့လူတွေကို ကျမတို့က ယုံကြည်ပါတယ် အားလဲ အားကိုးပါတယ်။ ကျမပြောချင်တာ ဒါပါပဲ။
ကျမက နိဂုံးချုပ်အနေနဲ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ ဒီလိုဂျာနယ်တွေက Highlightနဲ့ဖော်ပြပေးတာတွေဟာ ပြည်သူတွေလက်ထဲကိုရောက်သွားတာနဲ့ ပြည်သူတွေဟာ သတင်းအမှန်လို့ထင်သွားမှာပါ။ ဒီကောလဟလတွေကြောင့် ကျမတို့ နည်းပညာကျောင်းသူတစ်ရပ်လုံးက အများကြီးကို ခံစားနေရတာပါ။ အပြင်သွားရင် လုံခြုံမှုလဲနည်းလာပါတယ်။ ယူနီဖောင်းနဲ့သွားရင် ပတ်ဝန်းကျင်က နောက်ပြောင်စော်ကားတာတွေ ခံနေရပါတယ်။ ဒီလိုကောလဟာလတွေက စော်ကားခံနေရတာက တစ်ဆင့် ဒီလိုသတင်းအတည်ပုံစံနဲ့ စော်ကားခဲ့တဲ့အတွက် ပိုပြီး စော်ကားခံနေရပါတယ်။ ကျမတို့ နည်းပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်)ဟာ ကျမရဲရဲကြီး အာမခံရဲပါတယ် မြန်မာနိုင်ငံ နည်းပညာတက္ကသိုလ်တွေထဲမှာ အကောင်းဆုံးပါ။ အတော်ဆုံးကျောင်းသားတွေ မွေးထုတ်ပေးနေတဲ့ကျောင်းဆိုတာ ကျမအာမခံရဲပါတယ်။ ကျမတို့ မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအသင်းကလုပ်တဲ့ အင်ဂျင်နီယာပြိုင်ပွဲတွေမှာ ကျမတို့ကျောင်းက ၃နှစ်ဆက်တိုက်ဗိုလ်ဆွဲခဲ့ပါတယ်။ အဲလို အရည်အချင်းရှိတဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားတွေရှိရဲ့နဲ့ ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက် ကျမတို့ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကို ဂုဏ်သိက္ခာမရှိတဲ့လူတွေ၊ ဒီနည်းပညာကျောင်းသူတွေကိုလဲ ဒီလိုအတန်းအစားလို့ ထင်မြင်နေကြပါတယ်။ ဒီလိုထင်မြင်နေတာကို ချေဖျက်ချင်တဲ့အတွက် အမှန်တရားပေါ်ပေါက်စေဖို့အတွက် ဒီပွဲလေးကိုလုပ်တာပါ။ ကျမတို့ ကျောင်းသူ ကျောင်းသားတွေဟာ အသက်တွေအများကြီး မကြီးကြသေးပါဘူး။ ငြိမ်းချမ်းစွာ ပညာသင်ကြားစေလိုပါတယ်။ ကျောင်းသားတွေတင်မကဘူး ကျောင်းသူတွေပါ ခံစားစေရပါတယ်။ တစ်ယောက်ယောက်ကသာ လှုံ့ဆော်ပေးလိုက်ရင် ဆူပူမှုတွေဖြစ်ပွားသွားနိုင်ပါတယ်။ အဲလိုမျိုးမဖြစ်ပွားစေနိုင်ရန် ကျမတို့ကလဲ ကျမတို့ကျောင်းသူတွေ ထိန်းပါတယ်။ မီဒီယာတွေလဲ သေသေချာချာသိအောင်လို့ ရှင်းလင်းပွဲလုပ်ရတာပါ။ အခုချိန်ကစပြီး မီဒီယာသမားများမှ မေးမြန်းလိုသည်များမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ ကျမတို့ဘက်ကလဲ ဖြေနိုင်သမျှ အမှန်အတိုင်း သေသေချာချာဖြေပေးသွားပါမယ်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 7/28/2013 1 အကြံပြုခြင်း
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 7/28/20130အကြံပြုခြင်း
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 7/28/20132အကြံပြုခြင်း
ပုဂံမှာ ဗလီဆောက်မဲ. သီရိရွာ ဆိုတာ
တကယ်တော. ပုဂံမှာ ဗလီဆောက်မဲ. ရွာနာမည်အရင်းကတော. သီရိပစ္စယာရွာပါ။အရင်ကတော.
ရွာပေါ. အခုတော. ပုဂံမြို.ကြီးရွေ.လားပြီးတဲ.နောက်မှ၇ပ်ကွက် ဖြစ်သွားပါတယ်။ဆွယ်တော်လေး
ဆူမှာ တစ်ဆူ အပါအ၀င်ဖြစ်တဲ. လောကနန္ဒာ ဘုရားအနီးမှာတည်ရှိပြီး အရင်တစ်ချိန်က ကမ္ဘာ.
ကုန်သဘောင်္ကြီးများ ကုန်ရောင်းကုန်ဝယ်လုပ်တဲ. ဆိပ်.ကမ်းသာတဲ.ရွာလေးပေါ.။သီရိပစ္စယာ
နန်းတော် ရာဟာလဲ ယခုအချိန်ထိအောင် နေရာအမှတ်သား ကျောက်စာတိုင်များ အခိုင်အမာ
တည်ရှိနေသောကြောင်. ရှေးမြန်မာဘုရင်များ နန်းတော်တည်ခဲ.သော နေရာဖြစ်ပါသည်။
ပုဂံ ကိုဘုရားဖူးလာသူတိုင်း သီရိပစ္စယာရွာလေးကိုတော. မရောက်မနေရ ရောက်ကိုရောက်
ရပါတယ်။လောကနန္ဒာဆွယ်တော်မြတ်ကြီး ရှိနေတာရယ်။အရပ် ၈ပေကျော် တချိန်ကခါက
အာနန္ဒာ ထုထည်မှာ ဓမ္မရံ ဆိမ်.ကမ်းသာတာ လောကနန္ဒာ ဆိုသည်.အတိုင်း သီရိပစ္စယာရွာလေး
ဟာလဲ ဧရာဝတီမြစ်ကမ်းဘေးမှာ တည်ရှိနေသောကြောင်. ဆိမ်.ကမ်းသာတဲ.ရွာလေးပေါ.။
အခုတော. ဒီသီရိပစ္စယာဆိုတဲ.ရွာလေး ငွေရှင် ကြေးရှင် ဘာသာခြားတို.ရဲ. လက်ထဲ ရောက်ခြင်း
မလှရောက်နေရပြီးပေါ.။ရွာအနောက်ဘက်ပိုင်း ရွာပိုင်မြေမရှိတော. သလို ယခုဗလီဆောက်မဲ.
ရွာရဲ.ဘက်ပိုင်းကိုဦးတိုက်ပြီး ဗလီဆောက်မယ်ဆိုတော. ပုဂံသမိုင်နဲ. ပုဂံသားတို.ရာဇ၀င်ရိုင်း
By: ပုဂံပြည် မှ သူရဲကောင်း
ဒီနေရာက ကျွန်တော့်တို့ ပုဂံမြို့၊ သိရိရွာက ဗလီဆောက်မယ်ဆိုပြီး သတင်းထွက်နေတဲ့နေရာပါ...
“လုံခြုံရေးတွေက ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက်နေ့ကပင် ကင်းလှည့်တယ်၊ ကျွန်တော်တို့ သိတာက မနေ့ကဘဲ သိတယ်၊ အခုလက်ရှိ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် တစ်ယောက်တော့ ဖမ်းတယ်လို့ သိရတယ် ၊ ဖမ်းတာက လဝက အမှုနဲ့လို့ သိရတယ်’’ဟု ကျောက်ဖြူမြို့ခံတစ်ဦးက ပြောသည်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 7/26/20130အကြံပြုခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကားနံပါတ်ကို ဒီလို ဒီဇိုင်းမျိုးလုပ်ပြီး တပ်လို့ ရပါသလား
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 7/25/20130အကြံပြုခြင်း
ခရီးသည် ၈၀ သေဆုံး ခဲ့သည့် စပိန် ရထား တိမ်းမှောက်မှု ကို လုံ ခြုံရေး ကင်မရာ က ဤ သို့ရိုက်ကူး
Ko Marky's photo.
" ကျနော်နှင့် မစုစုနွေး "
ကျနော် သိကျွမ်းခဲ့ဖူးသမျှ အမျိုးသမီးတွေထဲမှာ၊
လူနုသလောက် စိတ်ဓာတ် ခက်ထန်မာကြောတဲ့သူ။ စကားအပြောအဆို ရိုးရှင်းပွင့်လင်းသလောက်၊
ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရ ခက်ခဲသူ …. ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့ ဖြူစင်ဖြောင့်မတ်မှုကို ဘယ်အခါမဆို မှတ်ကျောက်တင် ခံဝံ့သူ … ။
၂၀၀၅ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလထဲ။ ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေရဲ့စုရပ်ဖြစ်တဲ့ တောင်ဥက္ကလာက ကိုကိုကြီးရဲ့အခန်းကို ကျနော်ရောက်သွားတော့၊ မင်းကိုနိုင်နဲ့ကိုကိုကြီးတို့ စာတိုလေးတစ်စောင်ကို စိတ်ဝင်တစားဖတ်နေကြတယ်။ "ဘာစာလဲဗျ" ဆိုတော့၊ "ကော့မှူးက ကောင်မလေး တစ်ယောက်ရဲ့ စာပါ။ သူ့ကို တရားရုံးက အမိန့်ချတော့မှာကို ကျနော်တို့တတွေ လာရပ်တည်ပေးဖို့ လှမ်းရေးတာ" လို့ မင်းကိုနိုင်ကဆိုတယ်။ ကိုကိုကြီးကတော့ " သန်ဘက်ခါပဲဗျ။ ကျနော်တို့သွားကြမယ်။ ခင်ဗျား လည်း ပြင်ထားဦး" တဲ့။ ကနော်က " ဖြစ်ပါ့မလားဗျ။ ကျနော်တို့သွားမှ ပိုဆိုးနေဦးမယ်"ဆိုတော့၊ မင်းကိုနိုင်က "ကျနော် အကြောင်းပြန်လိုက်ပြီးသားပါ။ အစ်ကိုတို့ရောက်လာမှ ညီမလေးအတွက် ပိုဆိုးရင်လည်း ဆိုးသွားနိုင်တယ် ဆိုတာကို။ ဒါပေမယ့် သူက ခံနိုင်ရည်ရှိပါတယ်တဲ့။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် သူရင်ဆိုင်ပါ့မယ်တဲ့။ ဒီတော့လည်း သွားကြတာပေါ့ဗျာ"
ကျနော်ထောင်ထဲမှာရှိနေစဉ်ကာလ။ ၂၀၀၄/၂၀၀၅ ခုနှစ်တွေအတွင်း၊ ရေဒီယိုအစုတ်ကလေး ထဲကနေ သူ့အသံကို စကြားခဲ့ရဖူးတယ်။ ချက်ကျ၊လက်ကျနဲ့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း၊ ထိထိမိမိ၊ သတ္တိရှိရှိ ပြောဟန်ဆိုဟန်တွေကို အတော်များများကပဲ သဘောကျနှစ်သက်ကြတယ်။ အဲဒီ့ကာလက၊ စစ်အစိုးရ ရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေအပေါ် ILO (နိုင်ငံတကာ အလုပ်သမားအဖွဲ့)က အပြင်းအထန် တုန့်ပြန်နေချိန်၊ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ILO ရဲ့ တောင်းဆိုမှုတွေကို စစ်အစိုးရက (ဟန်ပြပဲဖြစ်ဖြစ်) လိုက်လျောဖို့ ကြိုးစားနေချိန်။ ဒီလို အချိန်မှာပဲ မစုစုနွေးတို့ ကော့မှူးမြို့နယ်မှာတော့ လုပ်အားပေး ဆိုပြီး အဓမ္မအလုပ်စေခိုင်းမှုတွေက ရှိနေဆဲ။ တောင်သူလယ်သမားသားသမီး၊
ကျေးတောသူတစ် ယောက်ဖြစ်တဲ့ မစုစုနွေးအနေနဲ့ ကိုယ့်ရွာသူရွာသားတွေ အခုလိုမတရားအဖိနှိပ်၊ အရက်စက်ခံနေရ တာကို ဘယ်လိုမှမကြည့်ရက်ဘူး။ ပြီးတော့ မစုစုနွေးဟာ ကော့မှူးမြို့နယ်၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့လူငယ်ခေါင်းဆောင်
တစ်ယောက်။ နိုင်ငံရေးနဲ့ခပ်ဝေးဝေးမှာ ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလို နေနေသူ မဟုတ်ဘူး။ စစ်အစိုးရနဲ့ ILO တို့ရဲ့ သဘောတူညှိနှိုင်းထားချက်တွေကိုလည်း သိပြီးသား။ ရန်ကုန်မြို့ မှာ ILO ကိုယ်စားလှယ် ရုံးထိုင်နေပြီဆိုတာလည်း သိပြီးသား။ ဒါပေမယ့် NLD အဖွဲ့ဝင်၊ မြို့နယ်လူ ငယ် ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ သူ့မိခင်ပါတီကို အလေးထားတယ်။အားကိုးတယ်။ဒီတော့ သူချစ်ခင် လေးစားတဲ့
မြောင်းမြ(ဦး)ဘဆွေ(၁၉၉၀ခုနှစ် ကော့မှူးမြို့နယ်အမတ်)ကို အားကိုးတကြီး သွားရောက်တိုင်ပင်တယ်။ "ဒါ နိုင်ငံရေးနဲ့မဆိုင်ဘူး သမီးရဲ့။ ဘာမှ သွားမလုပ်ပါနဲ့ "ဆိုတဲ့ ဖျောင်းဖျ မှုနဲ့ တပ်ခေါက်ပြန်လာရတယ်။ ဒါပေမယ့် မစုစုနွေးဆိုတာ အလွယ်တကူအလျှော့ပေးတတ်တဲ့ မိန်းကလေး မဟုတ်တော့၊ သူ အလှည့်ကျ တာဝန်ထမ်း ဆောင်နေတဲ့ NLD ရုံးချုပ်က လူကြီးတွေကို အားကိုးတကြီး တိုင်ပင်ပြန်တယ်။ " ဒါ NLD ပါတီဝင်တွေ လုပ်ရမယ့်အလုပ် မဟုတ်ဘူး။ နိုင်ငံရေး အလုပ် မဟုတ်ဘူး" ဆိုတဲ့ ဆိုဆုံးမမှုကိုပဲ ခံခဲ့ရပြန်တယ်။ ဒီအချိန်မှာ မစုစုနွေးကို အကူအညီ ပေးနိုင်တဲ့သူတွေက ချဉ်းကပ်လာကြတယ်။ မှော်ဘီက ဒေါ်နော်အုန်းလှ၊ တွံတေးက ကိုဇော်ဇော် …. စသဖြင့်။ သူတို့က အဓမ္မအလုပ်စေခိုင်းခံနေရသူတွေ
အပေါ် အကူညီပေးနိုင်မယ့်နည်လမ်းးတွေ၊ အကြံဥာဏ်တွေ ပေးကြတယ်။ မီဒီယာတွေကနေ ထိုးဖောက်နိုင်ဖို့ကိုလည်း အကူညီပေးကြတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့တတွေက NLD ပါတီကနေ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အထုတ်ပယ် ခံထားရသူတွေ။ ဒီတော့ ဒီလူတွေနဲ့ပေါင်းပြီး၊ ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ရင် လူကြီးတွေ မကြည်မဖြူ ဖြစ်နိုင်တယ်။ သူပါရောပြီး အဖွဲ့ချုပ်ကနေတောင် အထုတ်ပယ် ခံရနိုင်တယ်။ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ ဒါပေမယ့် စုစုနွေးက စုစုနွေးပဲလေ။
နိုင်ငံရေးသဘောတရားတွေ၊ ရပ်တည်ချက်တွေ၊ ပါတီစည်းမျည်းစည်းကမ်းတွေထက်၊ သူချစ်တဲ့ တောင်သူလယ်သမားတွေ၊ ရွာသူရွာသားတွေ ဒုက္ခကြုံတွေ့နေရတာကို သူမကြည့်ရက်ဘူး။ ကိုယ့်ကို ကိုယ် NLD ပါတီဝင်လို့ ကြွေးကြော်ထားပြီးမှ၊ ဒီလူတွေ ဒုက္ခဆင်းရဲဖြစ်နေရတာကို ဥပေက္ခာ မပြုရက် နိုင်ဘူး။ ဒီတော့ အဓမ္မအလုပ်စေခိုင်းခြင်းခံနေကြရတဲ့(လုပ်အားပေးနေကြရတဲ့) လုပ်ငန်းခွင်ထဲအထိ အရောက်သွားပြီး လေ့လာစုံစမ်းတယ်။ ရေလဲပုဆိုးအစုတ်တစ်ထည်ကို ခေါင်းမှာခြုံပြီး ချည်လုံချည် အနွမ်းလေးကို ဝတ်လို့ပေါ့။ ပြီးတော့ အသံဖမ်းစက်ကလေးနဲ့ အသံဖမ်းတယ်။ ဓာတ်ပုံတွေ လျှို့ဝှက် ရိုက်တယ်။ အချက်အလက်တွေ အသေးစိပ် စုဆောင်းတယ်။ သေချာပြီဆိုတော့မှ ILO ရုံးကို သွားပြီး တင်ပြတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာ ILO တာဝန်ခံက ဟိုဆေး ။သိပ်တော်တဲ့လူ။
သူ့ဆီ ရောက်လာတဲ့ အမှုတွဲတိုင်း ကို လက်လွတ်စပယ်လက်ခံတဲ့သူမဟုတ်ဘူး။ မစုစုနွေးကိုလည်း သူအကြိမ်ကြိမ် ဖျောင်းဖျသေးတယ်။ "ဒီ့အတွက်စစ်အစိုးရရဲ့
ငြိုငြင်မှုကို ခံရနိုင်တယ်။ အခန့်မသင့်ရင် ထောင်တောင်ကျနိုင်တယ်" စသဖြင့် ပေါ့။ ဒါပေမယ့် မစုစုနွေးက ရပ်တည်ချက် ခိုင်မာသူ။ ပြတ်သားတယ်။ လုံးဝ နောက်မဆုတ် ခဲ့ဘူး။ နောက်ဆုံးတော့ ဟိုဆေးကိုယ်တိုင် အဲဒီ့အမှုကို မစုစုနွေးနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်
ခဲ့တယ်။ မစုစုနွေး အပေါ် ဖိအားတွေအမျိုးမျိုး သက်ရောက်ခဲ့တယ်။
ငွေကြေးလာဘ်လာဘနဲ့ စည်းရုံးတယ်။ အသက် အန္တရာယ်ပြုဖို့အထိ ခြိမ်းခြောက် တယ်။ ဒါပေမယ့် မစုစုနွေး လုံးဝအလျှော့မပေးခဲ့ဘူး။ တရားတဲ့ ဘက်ကနေ
ပြတ်ပြတ်သားသားပဲ ရပ်တည်ခဲ့တယ်။ စစ်အစိုးရကလည်း ILO နဲ့ ပြေလည်မှုရဖို့ ကြိုးစား နေတဲ့ကာလမို့၊ မစုစုနွေးရဲ့ ထန်းမနိုင်ရွာက ရဝတ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး ဒီအဓမ္မအလုပ်စေခိုင်းမှု ကြောင့် ထောင်ကျသွားတယ်။ ဒါဟာ မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားမှုသမိုင်းမှာ မှတ်တမ်းဝင်လောက်တဲ့ အဖြစ်အပျက်ဖြစ်သွားတယ်။ မစုစုနွေးလည်း လူ့အခွင့်အရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ တစ်ယောက်အနေနဲ့ အတော်လေးထင်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် မကြာပါဘူး။ အခြား ရဝတ အဖွဲ့ဝင်တစ် ယောက်ရဲ့ အမှုဆင်တရားစွဲဆိုခြင်းခံလိုက်ရတယ်။ တရားရုံးမှာ အမှုရင်ဆိုင်နေရတယ်။ ဒါက ၂၀၀၅ခုနှစ်၊ ကျနော်တို့
ထောင်ထဲမှာရှိနေစဉ်ကာလ၊ ရေဒီယိုအစုတ် ကလေးကနေ နောက်ဆုံးကြားသိခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ။၂၀၀၅ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ၊၁၃ရက်နေ့။
ကိုကိုကြီးရဲ့အခန်းမှာ လူစုကြတယ်။ မင်းကိုနိုင်၊ ကိုကိုကြီး၊ ကိုစိုးထွန်း၊ ကိုအောင်နိုင်ဦး၊ မမီးမီး၊ မမာမာဦး။ လူစုံတော့ ပန်းဆိုးတန်းဆိပ်ကိုဆင်းကြတယ်။ ဒလဘက်ကမ်းကို ရောက်တော့ ကွမ်းခြံကုန်းသားဖြစ်တဲ့ ကိုဇော်မင်း
(ဒေဝဒတ်၊အာပြဲ)က လာကြိုတယ်။ ကျနော်ကတော့ ကော့မှူးတို့၊ ကွမ်းခြံကုန်းတို့
ဆိုတာ ဘယ်နားမှာရှိမှန်းတောင်မသိဘူး။ အစကဆို အဲဒီ့မြို့တွေကို ဧရာဝတီတိုင်း ထဲကလို့တောင် ထင်နေသေးတာပါ။ ဒလကနေကော့မှူးကိုတော့ တက္ကစီလို့ခေါ်တဲ့ ဆလွန်းကားအဖြူ လေးမှာ ကျပ်ကျပ်သပ်သပ်ထိုင်ပြီး စီးခဲ့ကြရတယ်။ တစ်နာရီနီးပါးတော့ စီးရပါတယ်။ ကော့မှူးမြို့ ဆိုတာ ဆလွန်းကားလေးတွေကို လိုင်းကားအဖြစ်ပြေးဆွဲတာကလွဲရင် မြစ်ဝကျွန်းပေါ်က ရွာကြီးတစ် ရွာနဲ့ပဲတူပါတယ်။ မြောင်းမြဦးဘဆွေရဲ့အိမ်ကို ကျနော်တို့သွားကြတယ်။ မစုစုနွေးက ထန်းမနိုင်ရွာ ကနေ လာရမှာ။ ကျနော်တို့ စုရုံးရောက်ရှိနေစဉ်မှာပဲ သတင်းတွေ အဆက်မပြတ်ကြားသိနေရတယ်။ ကျနော်တို့၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေ ရောက်လာတဲ့အတွက် မစုစုနွေးကိုထန်းမနိုင်ရွာကနေ တရားရုံးအထိလာလို့ မရအောင် အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့အစည်းအဆင့်ဆင့်က ဖန်တီးနေတဲ့အကြောင်း။ (ဥပမာ- ထန်းမနိုင်ရွာက စက်လှေတွေ အဲဒီ့နေ့မှာမထွက်ဖို့အမိန့်ထုတ်ပြန်တာမျိုး)။ဒါပေမယ့် စုစုနွေးပဲလေ …. သူ ချစ်ခင်လေးစားတဲ့ သူ့အစ်ကိုတွေရောက်နေပြီဆိုမှတော့၊ ကော့မှူး-ထန်းမနိုင် ၄ မိုင်ခရီးကို သူ မရောက် ရောက်အောင် ခြေလျင်လျှောက်ပြီးလာခဲ့တယ်။ ကျနော်တို့ရှိနေတဲ့ မြောင်းမြဦးဘဆွေရဲ့ အိမ်ကိုရောက်တော့ သူ့ခမျာ ချွေးတွေကို နစ်လို့။ အချိန်ကျလို့ တရားရုံးကို သွားကြတဲ့အခါ၊ လမ်းတ လျောက် မင်းကိုနိုင်နဲ့ကိုကိုကြီးတို့က သူ့ကိုအလယ်မှာထား၊ လက်တစ်ဖက်စီဆွဲပြီး တရားရုံးကို ချီ တက်ခဲ့ကြတဲ့ပုံဟာ သဘာဝကျကျနဲ့အရမ်းလှတယ်။ နိုင်ငံရေးအရလည်း အတော်အားကောင်းတဲ့ ဓာတ်ပုံလေး ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီ့အချိန်က ပထမဆုံးကိုင်ခဲ့ဖူးတဲ့ 2MP ကင်မရာလေးနဲ့ ကျနော်ရိုက်ခဲ့ တာပါ။ အဲဒီ့ဓာတ်ပုံလေးဟာ ကမ္ဘာကျော်ခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာရဲ့ သတင်းစာမျက်နှာတွေမှာ အကြိမ် ကြိမ် အဖော်ပြခံခဲ့ရတယ်။ အဲဒီ့နေ့က တရားရုံးမှာ သူရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ စီရင်ချက်ကတော့ သူ့အတွက် ရလာဒ်မကောင်းခဲ့ပါဘူး။ "အလုပ်နှင့်ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်ခွဲ" တဲ့။
ပြည်တွင်းပြည်ပကနိုင်ငံရေး အင်အားစုတွေ၊ILOနဲ့ နိုင်ငံတကာက
လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေက ဝိုင်းဝန်းဝေဘန်တိုက်ခိုက်ကြတယ်။ စုစုနွေးကို ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုကြတယ်။ ILOရဲ့ အရေးယူမှုကို ခံရဖို့အထိ
ဖြစ်လာတယ်။ အဲဒီ့ကာလတွေအတွင်းမှာပဲ၊ နိုင်ငံတကာမှာဂုဏ်သိက္ခာကြီးမားတဲ့"ဂျွန်ဟမ်းဖရီး(John Humphrey)" ဆုကို ၂၀၀၆ခုနှစ်အတွက် မစုစုနွေးရရှိခဲ့တယ်။ နိုင်ငံတကာရဲ့ ဖိအားပေးမှုတွေများလာတော့ ၂၀၀၆ခုနှစ်၊ဇွန်လဆန်းမှာပဲ မစုစုနွေးကို ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တယ်။ မစုစုနွေး ထောင်ကပြန်လွတ်လာ တော့ အင်းစိန်ထောင်ကနေ တန်းလာတာက သူချစ်တဲ့၊ယုံကြည်အားကိုးတဲ့၊
၁၈နှစ်သမီးကတည်းက ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့၊ သူ့ရဲ့မိခင်ပါတီNLD။ အဲဒီ့အချိန်မှာတော့ စုစုနွေးဆိုတာ ကော့မှူးမြို့နယ်၊ ထန်းမနိုင်ကျေးရွာက သာမန်ကျေးတောသူလေး
တစ်ယောက် မဟုတ်တော့။ တစ်နိုင်ငံလုံးသာမက နိုင်ငံတကာကပါသိတဲ့၊ ထင်ပေါ်ကြော်ကြားတဲ့ စုစုနွေးဖြစ်နေပါပြီ။ "လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှုရဲ့ နိမိတ်ပုံတစ်ခု"လိုလည်းဖြစ်ခဲ့ပါပြီ။ ဒါပေမယ့်စုစုနွေးရဲ့ထင်ပေါ်ကြော်ကြားမှု အမြင့်မားဆုံးကာလတွေ ကတော့ သူပြန်လည်လွှတ်မြောက်ပြီး သုံးလအကြာ၊
၂၀၀၆ခုနှစ်၊စက်တင်ဘာလအတွင်း ၈၈မျိုးဆက် ကျောင်းသား
ခေါင်းဆောင်(၅)ယောက် အဖမ်းခံလိုက်ရတဲ့အချိန်တွင်းပါပဲ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကလည်း နေအိမ်အကျယ်ချုပ်နဲ့ အဖမ်းခံနေရချိန်ဆိုတော့ အပြင်လောကမှာ လူသိများအထင်ရှားဆုံး က စုစုနွေးပဲ ရှိနေတာလေ။ ဒီတော့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အားလုံးလွတ်မြောက်ရေးနဲ့ လူထုအတွင်း နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကို ကျွင်းကျန်ရစ်တဲ့ ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေက ဖော်ဆောင်တဲ့အခါ စုစုနွေးရဲ့ ပါဝင်လှုပ်ရှားမှုက အခရာကျလာတယ်။ စုစုနွေးကလည်း သူချစ်ခင်လေးစားတဲ့အစ်ကိုတွေ အဖမ်းခံရတဲ့အတွက်ဆိုပြီး(NLDကတချို့သောလူကြီး၊လူငယ်တွေ တားဆီး
နေတဲ့ကြားထဲက) ၈၈မျိုးဆက် ကျောင်းသားတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတိုင်းမှာ ပါဝင် အားဖြည့်ပေးခဲ့တယ်။ ၈၈တွေရဲ့စုရပ်ဖြစ်တဲ့ ရန်ကင်းကအခန်း
(ကိုကိုကြီးနေသွားတဲ့အခန်း)မှာ ၈၈မျိုးဆက်ညီအစ်မတွေနဲ့အတူတူနေထိုင်ရင်း အပြည့်အဝ ရပ်တည်ပေးခဲ့တယ်။ အဲဒီ့အချိန်မှာ ကျနော့်ရဲ့တာဝန်က ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားများရဲ့ ပြန်ကြားရေးအပြင်၊ ညီမတွေရဲ့ စားဝတ်နေရေး၊ လုံခြုံရေးနဲ့ မစုစုနွေးကို ကြိုပို့တာဝန်။ ကော့မှူးကို ပြန်မယ့်အခါ ပန်းဆိုးတန်းဆိပ်ဟိုဘက်ကမ်းက ဒလအထိလိုက်ပို့။ ရန်ကုန်ကို ပြန်လာတဲ့အခါလည်း ဒလကနေ သွားကြို။ စုစုနွေးဟာ တကယ်တော့ ကျန်းမာရေး သိပ်မကောင်းရှာပါဘူး။ သူ့မှာမွေးရာပါ နှလုံးရောဂါရှိတယ်။ လူက ဖြူဖြူနုနု ပါးလှပ်လှပ်လေး။
လေတိုက်ရင်တောင် ပြိုလဲလေမလား ထင်ရ တဲ့သူ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ့ကာလတွေအတွင်း ခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးနဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့ ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်း သားလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ မနားတမ်းပါဝင်ခဲ့တယ်။NLDနဲ့ဝါရင့်နိုင်ငံရေးသမားကြီးတွေ ကြီးမှူးကျင်းပတဲ့ နိုင်ငံရေး အခမ်းအနားတိုင်းကိုလည်း မပျက်မကွက်
တက်ရောက်ခဲ့တယ်။ သူ့ကြောင့် အဲဒီ့ကာလက လူမှုရေး၊ နိုင်ငံရေးအခမ်းအနားတွေ ပိုမိုလှုပ်ရှားသက်ဝင်ခဲ့တယ်။ လူကနုနု၊ ရောဂါသယ်ဆိုတော့ စုစုနွေး မကြာခန
နေမကောင်းဖြစ်တယ်။ နေမကောင်းတဲ့ကြားထဲကပဲ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေတိုင်းမှာ အဆက်မပြတ်ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့တယ်။ တစ်ခါကဆိုရင် နေကမကောင်း၊ အားကလည်းနည်း။ မူးမေ့လဲကျ မတတ်ဖြစ်နေတာကိုတောင် အနားမယူခဲ့ဘူး။ သူ့ရဲ့ ဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းက ဆူဆူပူပူနဲ့ တိုက်တွန်းတော့မှပဲ
ကျောင်းသားခေါင်း ဆောင်(၅)ယောက် ပြန်လွတ်လာတော့လည်း၊ ရန်ကင်းအခန်းမှာ ညအိပ်ညနေ မနေပေးတော့တာက လွဲရင်၊ ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေရဲ့
နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ အရင်လိုပဲ ဆက်လက်ပူးပေါင်း ပါဝင်ပေးခဲ့တယ်။ ကျနော်ကလည်း သူ့ရဲ့ကိုယ်ရံတော်တပ်မှူးတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဆက်လက်တာဝန် ယူခဲ့တယ်။ ၂၀၀၇ခုနှစ်၊သြဂုတ်လနှောင်းပိုင်း၊ ကျနော်တို့ ၈၈မျိုးဆက်
ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်(၁၃) ဦး အဖမ်းခံရတဲ့ညမှာဆို၊ သူပါရောပြီး အဖမ်းခံပါ့မယ်ဆိုလို့ ကျနော့်မှာ မနည်းကိုချော့မော့ဖျောင်းဖျ ထားခဲ့ရတယ်။ စစ်အစိုးရက တိုင်းပြည်မငြိမ်မသက်ဖြစ်မှာစိုးလို့ဆိုပြီး ကျနော်တို့ကို ကြိုဖမ်းခဲ့တာ။ တကယ်တမ်းကျတော့ ကျနော်တို့ကို ဖမ်းတော့မှပဲ လူထုကြားထဲမှာ မတည်ငြိမ်မှုတွေ ပိုမိုဖြစ်ပေါ်လာ ရတာ။ အပြင်မှာ အဖမ်းမခံရဘဲ ကျန်နေရစ်တဲ့သူတွေကလည်း ကျနော်တို့တတွေကို ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ အဆက်မပြတ် တောင်းဆိုတိုက်ပွဲဝင်ကြတယ်။ အဲဒီ့သတင်းတွေကိုလည်း ကျနော်တို့တတွေ ကြားသိ နေရတယ်။
စုစုနွေးအပါအဝင်၊မဖြူဖြူသင်းနဲ့ နီလာသိန်းတို့ကို ဖမ်းဝရမ်းတောင် ထုတ်တဲ့အကြောင်း တွေလည်း ကြားသိရတယ်။ လှည်းတန်းနားမှာ စုစုနွေးကို ကိုယ့်အင်အားစုတွေနဲ့ အာဏာပိုင်ဘက် သားတွေ ဝိုင်းလုဆွဲလွဲကြတဲ့
အကြောင်းလည်း ကြားသိရတယ်။ ကိုယ့်အင်အားစုတွေက အသာရလို့ အဲဒီ့တုန်းက စုစုနွေး အဖမ်းမခံလိုက်ရပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ နိုဝင်ဘာလထဲရောက်တော့ စုစုနွေးတစ်ယောက် အာဏာပိုင်တွေရဲ့ မလှိမ့်တစ်ပါတ်နဲ့ ဖမ်းဆီးတာကို ခံလိုက်ရပါတယ်။ ခနခေါ်ထားတာပါဆိုပြီး ထောင်ထဲမထည့်ဘဲ ဗဟန်းမြို့နယ်ထဲက တစ်နေရာမှာထားတယ်။ လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေ လာရောက်လေ့လာတဲ့ 'မစ္စတာပီနဲရိုး' လာတော့ အင်းစိန်ထောင်ဧည့်ခန်းမှာ မစုနွေးသွားတွေ့ရတယ်။ 'မစ္စတာပီနဲရိုး' ပြန်သွားလို့မကြာပါဘူး။ မစုစုနွေးကို အင်းစိန်ထောင်ထဲထည့်တယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်အတွက် ဆောက်ထားတယ်ဆိုတဲ့ တိုက်အိမ်လေးမှာ တစ်ယောက်တည်းထားတယ်။ ထောင်ထဲ မှာ သူဒေါသတွေ မကြာခနပေါက်ကွဲ
နေတယ်ဆိုတာလည်း ကြားသိနေရတယ်။ အဓိကက တော့ သူ့ကို မလှိမ့်တစ် ပါတ်နဲ့ ထောင်ထဲထည့်တာကို သူလုံးဝမကျေနပ်တာ။ ဒီလိုနဲ့၊ ကျန်ာတို့တတွေ အမိန့်မကျ ခင်မှာပဲ သူကအရင် ထောင်ကျသွားတယ်။ အလုပ်နှင့်ထောင်ဒဏ်(၁၂)နှစ်တဲ့။ ကျနော်တို့တတွေ အမိန့်ကျအပြီးမှာတော့ သူ့ကိုထောင်ပြောင်းပို့လိုက်တယ်။ ကလေးထောင်။ နောက်ပိုင်းမှာ ကလေး ထောင်ကနေ ခန္တီးထောင်ကိုပြောင်းရွှေ့ရတယ်လို့လည်းကြားတယ်။ ၂၀၁၁ခုနှစ်၊အောက်တိုဘာလထဲ မှာတော့ ပြောင်းလဲလာတဲ့
နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေအရ မစုစုနွေး ထောင်ကပြန်လည်လွတ်မြောက်ခဲ့ ပါတယ်။ ။
ဇူလိုင်လ(၂၇)ရက်နေ့ထုတ် အာရှအလင်းဂျာနယ်မှ … …
ရှမ်းပြည်နယ် လားရိုးမြို့မှာ ဓါတ်ဆီလောင်းမီးရှိုခ...
သက်ဆင်ရှင်နာဝပ်ကို သတ်ဖြတ်မည်ဟု ခြိမ်းခြောက်သည့် ဗ...
နည်းပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်) ကျောင်းသားများ၏ အမှန်တရား...
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကားနံပါတ်ကို ဒီလို ဒီဇိုင်းမျိုးလ...
ခရီးသည် ၈၀ သေဆုံး ခဲ့သည့် စပိန် ရထား တိမ်းမှောက်မှု...